Anime 10 tsy azo antoka miaraka amin'ny licence sketchy any andrefana - Hafa
Anime 10 tsy azo antoka miaraka amin'ny sasany amin'ireo fahazoan-dàlana Sketchiest eny amin'ny tsena andrefana
Sary naseho: zerochan.net
Lohateny maro no mahazo alalana ary avy eo hadino fa ny hafa aza tsy mahazo alalana na eo aza ny fangatahana sy ny lazany. Ity lahatsoratra ity dia mijery ny 10 amin'ireo fahazoan-dàlana izay tsy azo antoka amin'ny tsena Andrefana amin'izao fotoana izao.
1 - Revolutio mivaingana
Loharano sary: Tranonkala ofisialy
Nahazo fahazoan-dàlana avy amin'ny FUNimation taloha kelin'izay, mbola tsy naheno na inona na inona momba an'ity anaram-boninahitra ity izahay hatramin'ny nahavitana azy. Na dia nandany fotoana aza ny FUNimation ary azo lazaina ho tsy azo atao ny mamela ny manana fahazoan-dàlana mandoa vola be hiketrika fotsiny, dia toa hafahafa fa tsy nisy fandrosoana azo natao ho an'ity anaram-boninahitra ity.
Angamba ny lafiny Japoney dia mitazona ny famotsorana saingy zavatra iray no azo antoka, ny fe-potoana famoahana ny Concrete Revolutio dia toa efa ho lany.
Tsy noraharahaina indrindra tany Andrefana i Gintama, tamin'ny farany nahazoany ny famoahana voalohany tao amin'ny faritany tandrefana rehefa namoaka ny fizarana 49 voalohany tamin'ny DVD misy dikanteny i Sentai Filmworks tamin'ny 2010 sy 2011.
Amin'ny farany, ilay sarimihetsika mihetsika dia hahita famoahana ihany koa, tamin'ity indray mitoraka ity dia nantsoina hoe English, avy amin'i Sentai; saingy nanomboka tamin'izay dia tsy namoaka trano tokana Gintama izy ireo. Azo antoka ny mieritreritra fa ny franchise, ao amin'ny fandaharam-potoanan'i Sentai, dia maty. Saingy avy eo novelomina indray ny fanantenana ho an'ny mpankafy rehefa nanomboka namoaka ny fizarana voatondron'ilay andian-tantara i Crunchyroll ary avy eo FUNimation dia namoaka DVD / BD andiany fizarana vao tsy ela akory izay.
Ka inona ny olana? Ny olana dia ny Funimation dia namoaka fizarana avy amin'ny tapany farany amin'ilay andiany, fa tsy ny fiandohana.
Amin'izao fotoana izao dia manana fizarana zato mahery izay neken'i Crunchyroll fa tsy manan-jo izy, afaka maminavina fotsiny isika noho i Sentai nihazona ny fahazoan-dàlana tsy ampiasain'izy ireo intsony, tsy misy hevitra raha voatonona izy ireo, avelao hivoaka amin'ny haino aman-jery ara-batana.
Raha tsy hiteny izany dia mety ho tsy dia misy dikany ara-bola ny famoahana ireo fizarana ireo na dia Crunchy sy Funi ihany aza no hahalala amin'izao fotoana izao.
Loharanon-tsary: ​​nalaina avy tamin'ny andian-tsarimihetsika TV Lyrical Nanoha
Na ny vanim-potoana voalohany sy faharoa an'ny franchise dia nahazo alalana tamin'ny Geneon Entertainment ary navotsotra tamin'ny dub tamin'ny tapaky ny 2000.
Hatramin'ny nianjeran'ny tsenan'ny anime dia tsy nisy fampandrosoana hafa intsony taorian'ny fanankinan'i Nanoha andrefana. StrikerS, na ny vanim-potoanan'ny Vivid na ny sarimihetsika dia mitoetra tsy misy famotsorana ara-batana, avelao ny dub, ary izay rehetra nahazo alalana hifandray tanana dia onja ara-dalàna ho an'ny sasany amin'ireo lohateny ireo.
Miaraka amin'ny franchise mbola mandeha mafy na inona na inona mety hitranga, fa maninona no mbola tsy nisy ary inona no hitranga amin'ireo andian-tsarimihetsika sy sarimihetsika mbola tsy navotsotra dia tombantomban'ny olona amin'izao fotoana izao.
tsy mpiady aho ary tsy hiady intsony
Misy aza ny tombantombana fa mety tafiditra i Aniplex na dia tsy misy porofo mivaingana aza eo. Ny taratra fanantenana iray dia ny famoahana teatra andrefana ny sarimihetsika Nanoha izay toa manondro ny lafiny Japoney amin'ny indostria farafaharatsiny mbola liana amin'ny tsena tandrefana.
4 - Fiste / kaleid liner Prisma ☆ Illya 3rei !! (Na vanim-potoana 4) + ny Sarimihetsika
Nahazo fahazoan-dàlana sy nantsoina ary namoaka ny fizaran-taona voalohany amin'ity andiany ity ho an'ny Tandrefana i Sentai Filmworks. Ny vanim-potoana fahefatra sy ny sarimihetsika dia mbola navoaka na dia tsy nisy aza ny teny momba ny fahazoan-dàlana nomena azy ireo.
Tsy azo antoka ny zava-mitranga amin'ity franchise ity. Izy io dia ampahany amin'ny Lahatra / franchise lehibe kokoa ary noho izany dia toa tsy mahasoa na avela.
Crunchyroll sy Sentai dia niady momba ny anaram-boninahitra vao tsy ela akory ary angamba FUNimation, amin'ny alàlan'ny Crunchyroll, izay manana zon'ny fidirana vaovao amin'ity franchise ity fa raha izany no izy, maninona no tsy niresaka momba izany izy ireo.
Mazava ho azy, Funimation dia naneho ny tsy fahampian'ny fahalalam-pomba raha ny lohateny navoakan'izy ireo tamin'ny alàlan'ny orinasa hafa satria hitantsika ny fampitandremana kely momba an'i Kabaneri an'ny Iron Fortress sy Re: Zero. Na dia nohamafisina ho famotsorana ara-batana aza ny iray ary Re: Zero dia efa naseho fa manana dub ao amin'ireo sanganasa.
Amin'izao fotoana izao, tsy misy resaka momba izay hitranga amin'ny asa ho avy amin'ity ampahan'ny franchise ity sy ny fetr'andro ho an'ny olona iray manambara fa manana fahazoan-dàlana izy ireo fa lany haingana.
Loharano sary: Pejy Crunchyroll an'ny andiany
Na ny vanim-potoana voalohany sy faharoa dia navoaka tao amin'ny BD sy DVD niaraka tamin'ny dub avy amin'i Sentai Filmworks fa niverina tamin'ny taona 2013. Nanomboka teo, ny vanim-potoana fahatelo sy farany, na dia nahazo alalana aza, dia mbola tsy navotsotra na noresahin'i Sentai ara-batana mihitsy haino aman-jery.
Angamba azontsika atao ny maminavina ny vanim-potoana voalohany sy roa dia tsy nivarotra tsara ary nanapa-kevitra ny hipetraka amin'ny fahazoan-dàlana izy ireo saingy hieritreritra ianao fa hamoaka izany ihany koa mba hamerenana ny vidiny.
Mazava ho azy, nilaza i Sentai fa na inona na inona hanombohan'izy ireo mandoka dia hahita ny tohiny na ny fihodinana ho avy koa hahazo dub ary noho izany dia mety nanapa-kevitra izy ireo fa raha ny vanim-potoana fahatelo dia tsy mendrika ny dubbing, dia tsy mendrika ny avoaka mihitsy. Na dia dub na tsia, dia toa liana ihany ny fahalianana fa rehefa namindra ny lohateniny avy tao amin'ny Network Network ho HIDIVE i Sentai, ny vanim-potoana voalohany sy roa amin'ireo andiany dia samy nafindra fa ny vanim-potoana fahatelo dia tsy.
Toa tsy dia azo inoana loatra amin'ity fotoana ity fa hahita famoahana ara-batana an'ity anaram-boninahitra ity isika ato ho ato fa ny tena mahasosotra indrindra dia ny fandavan'i Sentai hanavao ireo mpankafy ny toe-draharaha.
6 - Rock Lee sy ny Ninja Pals-ny
Loharano sary: TV Tokyo
Tamin'ny taona 2012, fahazoan-dàlana VIZ, nantsoina ary nandefa an'i Rock Lee sy ny Ninja Pals fa tsy toy ny fananana hafa amin'ny franchise Naruto, tsy nahita famotsorana ara-batana mihitsy.
Na i Australia (Through Madman Entertainment) dia namoaka ny lohateny tamin'ny horonantsary an-trano; na dia amin'ny DVD ihany.
Toa hafahafa fa tsy nanao na inona na inona tamin'io i VIZ, angamba ratsy ny isa mivantana, saingy amin'izao fotoana izao dia toa tsy hisy ny famotsorana, na tsy avy amin'ny VIZ farafaharatsiny.
Ilay fidirana vaovao malaza ao amin'ny franchise Naruto, Boruto, dia toa azo antoka fa hahita famotsorana ara-batana amin'ny fotoana iray. Saingy, ny tsy fahampian'ny fampahalalana momba ilay andian-tantara dia somary mampiahiahy ihany.
VIZ dia manana ny fahazoan-dàlana ho an'i Boruto sy ny zon'ny famotsorana ara-batana koa. Raha ampitaina ao amin'ny Crunchyroll izy io ankehitriny, tsy misy vaovao momba ny dub na ny famoahana horonantsary an-trano; na ny fanamafisana ny tetik'asa toy izany aza dia miasa.
Na dia hitantsika tamin'ny alàlan'i Funimation aza ny fikirakiran'ny Dragon Ball Super sy VIZ an'i Hunter x Hunter fa ny andian-dahatsoratra avo lenta dia afaka mangina mandra-pahatongan'ny famotsorana azy ireo, dia mety ho fiandrasana lava sy tsy azo antoka ho an'ireo mpankafy izany.
Raha mila miloka aho dia mety hisy ny fanambarana momba ny famotsorana ara-batana na aorian'ny fizaran'izy ireo ny fizarana 100 na rehefa vita ny famoahana ireo set DVD DVD Shippuden.
8 - mpamosavy fitokonana: zana-pandresen'ny fandresena
Ireo vanim-potoana roa an'ny Strike Witches sy ilay sarimihetsika dia nahazo alalana, nantsoina sy navoakan'i Funimation ary ny andiany Brave Witches vaovao dia efa nahazo dub ary azo antoka fa hahita famoahana ao anatin'ny fotoana fohy. Fa ahoana ny amin'ny OVA Operation Victory Arrow?
Ny Funimation dia tsy nahazo alalana na nanonona ny OVA ary miaraka amin'ny tantarany tsy mitovy amin'ny OVA misy aza ny franchise efa niorina ary koa ny fotoana lasa izay taorian'ny famoahana azy, dia mampisalasala antsika ny hahita famoahana ara-batana an'ity ampahan'ny franchise ity. .
9 - Ra +
Loharanon-tsary: ​​fitaovana fampiroboroboana Production IG
Natomboka tamin'ny taona 2005 ity andiany ity ary nahita ny làlana, nantsoina hoe, tao amin'ny fahitalavitra Amerikanina tamin'ny 2007. Navoaka tamin'ny DVD tamin'ny famoahana boky mbola tsy feno izy io ary avy eo navoaka tao anaty boaty fizarana miisa 25, tamin'ny 2009.
Ireo andiany roa ireo dia tsy natonta intsony. Mbola tsy fantatsika izay hitranga amin'ity andiany ity: raha mbola hiverina izy io, raha hahazo famotsorana BD sns ... Fa miaraka amin'i Sony, izay manana ny fahazoan-dàlana, nividy Funimation, angamba manokatra vaovao ity fahafaha-manao amin'ny ho avy tsy ho ela; na manantena ny mpankafy.
10. - Mushishi: Ny toko manaraka (na fizarana 2)
Nahazo fahazoan-dàlana avy amin'ny Funimation i Mushishi, nantsoina sy navoaka tamin'ny 2007 - 2008, avy eo tao anaty boaty napetraka tamin'ny 2008 ary farany, nahatratra ny SAVE Edition tamin'ny 2011.
Ny vanim-potoana voalohany na izany aza dia tsy navoaka indray tamin'ny Blu-ray ary toa tsy hahita fitsaboana toy izany intsony atsy ho atsy. Ny andiany Mushishi dia nahita tohiny manokana 1 ora (Hihamukage), andiana tohiny (toko manaraka) ary sarimihetsika (Mampifanaraka ny tsipika farany an'ny manga); ireo rehetra ireo dia nahazo alalana avy amin'i Aniplex saingy tsy navotsotra mihitsy.
Toy ny fahazoan-dàlana Aniplex taloha, tsy mbola nandre na inona na inona momba izany koa izahay.
Nisy fotoana, lisitra famotsorana ho an'ny vanim-potoana faharoa ny Madman Australia ary nilaza fa misy dub izany, saingy nesorina tao anatin'ny andro vitsivitsy ity lisitra ity.
Rehefa nandeha ny fotoana be dia be, Mushishi izay tsy malaza (Na farafaharatsiny tsy manaram-bola hikarakarana orinasa lehibe) any andrefana sy famantarana maro mifanipaka momba ny fanjakan'ny fahazoan-dàlana, heverin'ny tsirairay raha ho sisa ny Mushishi avoaka.
Ity izy, amin'izao fotoana izao farafaharatsiny. Misy lohateny maro tsy tambo isaina amin'ny toe-javatra mitovy amin'izany ary angamba hanao lahatsoratra iray hafa momba ny lohahevitra aho amin'ny fotoana iray. Fa amin'izao fotoana izao, te-hiroso amin'ny lohahevitra samihafa aho.
Toy ny mahazatra, raha manana fampahalalana ianao na hevitra momba ireto lohateny manaraka ireto sy ny toe-javatra misy azy dia aza misalasala manome hevitra.
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Gabriel Persechino-Forest avy any Bilaogy Vaovao Sakura Anime News.
Fahazoan-dàlana tsy azo antoka 5 (Fizarana 1)
Fahazoan-dàlana tsy azo antoka 5 (Fizarana 2)
inona ny sombin'aina anime